Che cosa sono i Salmi e chi li ha scritti realmente? | PREGHIERA&NEWS
Gịnị bụ Abụ Ọma na onye dere ya n'ezie?
Akwụkwọ Abụ Ọma bụ nchịkọta nke abụ ndị ebidoro iji bụrụ abụ ma na-abụ abụ iji fee Chineke ofufe.Ọ bụghị otu onye dere Abụ Ọma kamakwa ọ dịkarịa ala ụmụ nwoke isii dị iche iche dere n'ime ọtụtụ narị afọ. Moses ekewet kiet ke otu Psalm ye iba, Edidem Solomon ekewet n̄kpọ nte isua 450 ke ukperedem.
Wrotenye dere abụ ọma?
Otu narị abụ ọma na-egosipụta onye dere ha na okwu mmeghe na usoro nke "Ekpere nke Moses, onye nke Chineke" (Abụ Ọma 90). N'ime ndị a, mmadụ iri asaa na atọ họpụtara Devid ka ọ bụrụ odeakwụkwọ. Iri ise n'ime Abụ Ọma akpọghị onye dere ha, mana ọtụtụ ndị ọkà mmụta kwenyere na ọ ga-abụkwa na Devid dere ụfọdụ n'ime ha.
Devid bụ eze Israel ruo afọ iri anọ, a họpụtara ya maka ọrụ n'ihi na ọ bụ "nwoke dị ka obi Chineke si dị" (40 Samuel 1:13). Roadzọ ọ gara n’ocheeze dị ogologo ma dịkwa okwute, bido mgbe ọ ka dị obere, na-anatabeghị ya ọrụ agha. O nwere ike ịbụ na ị nụla akụkọ banyere otu Chineke si merie dike site n'aka Devid, onye dike nke ụmụ Israel toro eto na-atụ oke egwu ịlụ ọgụ (14 Samuel 1).
Mgbe ihe osise a mere ka ụfọdụ ndị na-akwado Devid nwee obi ụtọ, Eze Sọl malitere inwe anyaụfụ. Devid ji ikwesị ntụkwasị obi jee ozi n'obí Sọl dị ka onye na-akụ egwú, na-eme ka eze jiri ụbọ akwara ya dị jụụ na ndị agha ya dị ka onye ndú nwere obi ike na nke na-aga nke ọma. Sọl kpọrọ ya asị. Sọl mechara kpebie igbu ya ma chụwa ya ruo ọtụtụ afọ. David dere ụfọdụ n'ime Abụ Ọma ya mgbe ọ na-ezo n'ime ọgba ma ọ bụ n'ọzara (Abụ Ọma 57, Abụ Ọma 60).
Olee ụfọdụ ndị ọzọ dere akwụkwọ Abụ Ọma?
Ke ini David ekewetde n̄kpọ nte mbahade iba ke otu Psalm, mme andiwet n̄wed eken ẹma ẹkwọ itoro, eseme, ye ekọm.
Kiet ke otu nditọ David, Solomon ama ada itie ete esie nte edidem onyụn̄ ọwọrọ etop ke ofụri ererimbot oto akwa ọniọn̄ esie. Ọ bụ nwata mgbe ọ nọkwasịrị n’ocheeze, mana 2 Ihe E Mere 1: 1 na-agwa anyị “Chukwu nọnyeere ya ma mee ka ọ dị oke oke.”
N’ezie, Chineke nyere Solomọn onyinye dị ịtụnanya na mbido ọchịchị ya. “Gwa ihe ị chọrọ ka m nye gị,” ka ọ gwara eze na-eto eto (2 Ihe E Mere 1: 7). Kama Sọlọmọn inwe akụnụba ma ọ bụ ikike, ọ chọrọ amamihe na ihe ọmụma ọ ga-eji chịa ndị Chineke, bụ́ Izrel. Chineke zara site n’ime ka Sọlọmọn mara ihe karịa onye ọ bụla ọzọ dịrị ndụ n’ụwa (1 Ndị Eze 4: 29-34).
Sọlọmọn dere Abụ Ọma nke 72 na Abụ Ọma 127. N’ime ha abụọ, ọ ghọtara na ọ bụ Chineke mere ka eze nwee ikpe ziri ezi, ezi omume na ike.
Itan na Heman
Mgbe akọwara amamihe Sọlọmọn na 1 Ndị Eze 4: 31, onye edemede ahụ kwuru na eze "maara ihe karịa onye ọ bụla ọzọ, gụnyere Ethan Ezzita, mara ihe karịa Heman, Kalkol na Darda, ụmụ Mahol ...". Cheedị echiche ịbụ onye maara ihe nke ga-echebara ụkpụrụ e ji tụọ Solomọn echiche! Ethan na Heman bụ mmadụ abụọ n’ime ndị amamihe a karịrị akarị, a na-ekwukwa na abụ ọma diri nke ọ bụla n’ime ha.
Ọtụtụ abụ ọma na-ebido ịkwa arịrị ma ọ bụ akwa arịrị wee kwụsị mgbe ha na-efe ofufe, ka a na-akasi onye dere ya obi banyere ịdị mma nke Chineke.Mgbe Ethan dere Abụ Ọma nke 89, ọ tụgharịrị ihe atụ ahụ. Ethan ji abụ otuto na-enye ọ beginsụ na-amalite, na-esozi Chineke iru uju ma na-arịọ maka enyemaka maka ọnọdụ ya ugbu a.
Heman, n’aka nke ọzọ, jiri ịkwa ákwá bido ma kwusi na Abụ-ákwá n'Abụ Ọma nke 88, nke a na-akpọkarị abụ abụ kacha mwute. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ abụ ọ bụla na-edoghị anya nke abụ ákwá na-adabere n'ihe ndị magburu onwe ha nye Chineke. Ọ bụghị otú ahụ ka ọ dị Abụ Ọma nke 88, nke Heman dere mgbe ya na ofmụ Kora na-emekọ ihe.
Ọ bụ ezie na Heman nwere nnukwu mwute na Abụ Ọma nke 88, ọ malitere abụ ahụ: "Onyenwe anyị, Chineke nke na-azọpụta m ..." wee jiri amaokwu ndị ọzọ na-arịọ Chineke maka enyemaka. ọnwụnwa gbara ọchịchịrị, dị arọ ma dị ogologo karị.
Heman tara ahụhụ kemgbe ọ bụ nwata, na-eche na "eloro ya kpam kpam" ọ nweghịkwa ike ịhụ naanị naanị ụjọ, ụjọ na obi nkoropụ. Ma lee, ọ nọ, na-egosi mkpụrụ obi ya nye Chineke, ka kwere na Chineke nọnyeere ya ma na-anụ mkpu ya. Rome 8: 35-39 ọsọn̄ọ ọnọ nnyịn ete ke Heman ama enen.
Heman abụghị naanị ọbụ abụ nwere mmetụta dị otú a. N’Abụ Ọma 73: 21-26, Esaf kwuru, sị:
“Mgbe obi gbawara m
na mmụọ m iwe,
M nzuzu na amaghị ihe;
Abụ m ajọ anụmanụ n'ihu gị.
Ma mụ na gị nọ mgbe niile;
I jidere m n’aka nri.
Jiri ndụmọdụ gị duzie m
na mgbe ahu I ga-eduru m nye otuto.
Donye ka m nwere n’eluigwe ma e wezụga gị?
Na ụwa nwere ihe ọ bụla m chọrọ ma e wezụga gị.
Anụ ahụ m na obi m adawo mbà, +
ma Chineke bu ike nke obim
ye nke udeme mi ke nsinsi “.
Echichi nke Eze Devid họpụtara dịka otu n'ime ndị isi na-akụ egwu, Esaf jere ozi n'ụlọikwuu ahụ n'ihu igbe Chineke (1 Ihe E Mere 16: 4-6). Afọ iri anọ ka nke ahụ gasịrị, Esaf ka na-eje ozi dị ka onye isi nke òtù nzuzo ahụ mgbe e bugara igbe ahụ n'ụlọ nsọ ọhụrụ nke Eze Sọlọmọn wuru (2 Ihe E Mere 5: 7-14).
N'Abụ Ọma nke iri na abụọ e dere n'aka ya, Esaf laghachiri ọtụtụ ugboro n'isiokwu nke ikpe ziri ezi nke Chineke. Ọtụtụ n'ime ha bụ abụ arịrị nke na-egosi oké ihe mgbu na nhụjuanya ma na-arịọ enyemaka Chineke.Ka ọ dị, Esaf kwukwara obi ike na Chineke ga-ekpe ikpe ziri ezi na na emesia ag justicekpe ikpe. Nweta nkasi obi n’icheta ihe Chineke mere n’oge gara aga ma tụkwasị-obi na Onye-nwe-anyị ga-anọgide n’ikwesị ntụkwasị-obi n’ọdịn’iru ngbogbo nke ugbua (Abụ Ọma 12).
Abasi okokot enye ada nditọ Israel ọwọrọ ke ufụn ke Egypt ye ke isua 40 oro mmọ ẹkeyode ke wilderness, Moses ama esiwak ndibọn̄ akam ke ibuot ikọt esie. N'ikwekọ n'ịhụnanya ya n'ebe Israel nọ, ọ na-ekwu maka mba ahụ dum n'Abụ Ọma nke 90, na-ahọrọ nnọchiaha "anyị" na "anyị" n'ogologo.
Amaokwu nke kwuru, sị, "Onyenwe anyị, ị bụ ụlọ anyị maka ọgbọ niile." Ọgbọ nile nke ndị na-efe ofufe mgbe Mosis gasịrị ga-anọgide na-ede abụ ọma na-ekele Chineke maka ikwesị ntụkwasị obi ya.
Kora bụ onye ndú nke nnupụisi megide Mosis na Erọn, ndị ndu Chineke họpụtara ka ha zụọ Israel. Dị ka onye ebo Livaị, Kora nwere ihe ùgwù nke ilekọta ụlọikwuu ahụ, bụ́ ebe obibi nke Chineke, ma nke ahụ ezughị Kora. O kwosoro nwa nwanne nna ya bụ́ Erọn ekworo ma nwaa ịnara ya ndị nchụàjà.
Mozis dọrọ ụmụ Israel aka ná ntị ịhapụ ụlọikwuu nke ndị nnupụisi a. Ọkụ sitere n’elu-igwe riri Kora na ndị na-eso ya, ụwa wee rebe ụlọ-ikwuu ha nile (Ọnụ Ọgụgụ 16: 1-35).
Baịbụl agwaghị anyị afọ ole ụmụ ndị ikom Kora mụrụ mgbe ọdachi a mere. Ọ dị ka ha ma ihe amamihe zuru ezu ịghara ịgbaso nna ha na nnupụisi ya ma ọ bụ na-eto eto itinye aka (Ọnụ Ọgụgụ 26: 8-11). N’ọnọdụ ọ bụla, ụmụ Kora nwere ụzọ dị nnọọ iche na nke nna ha.
Ubon Korah ẹkesụk ẹnanam utom ke ufọk Abasi ke n̄kpọ nte isua 900 ama ekebe. 1 Ihe E Mere 9: 19-27 gwara anyị na e nyefere ha mkpịsị ugodi nke ụlọ nsọ ahụ, na ọ bụ ha na-eche ọnụ ụzọ ya nche. Ọtụtụ n'ime abụ ọma ha 11 na-awụkwasị ofufe dị omimi na nke onwe nke Chineke. Na Abụ Ọma 84: 1-2 na 10, ha dere banyere ahụmịhe nke ije ozi n'ụlọ Chineke:
"Lee ka ụlọ gị si maa mma,
Onye-nwe-ayi Nke puru ime ihe nile!
Agụụ mkpụrụ obi m achọwo,
maka ogige nke Onye-nwe;
Obi m na anụ ahụ m na-akpọku Chineke dị ndụ.
O ka nma otu ubochi n’azu ulo gi
karịa otu puku ebe ọzọ;
Ọ ga-akara m mma ịbụ onye na-eburu m ihe n’ụlọ Chineke m
Karịa ibi n'ụlọikwuu ndị ajọ omume ”.
Gini ka Abụ Ọma kwuru?
Site na otu ndị edemede dị iche iche dị otú ahụ na abụ 150 na nchịkọta ahụ, enwere ọtụtụ mmetụta na eziokwu ndị akọwapụtara na Abụ Ọma.
Abụ abụ ákwá na-egosipụta oke ihe mgbu ma ọ bụ iwe dị ọkụ na mmehie na nhụjuanya ma na-etiku Chineke maka enyemaka. (Abụ Ọma 22)
Abụ otuto na-ebuli Chineke elu maka ebere na ịhụnanya ya, ike na ịdị ebube. (Abụ Ọma 8)
Abù ekele nile n givekele Chineke, Onye zọputara abù ọma ahu, na ikwesi-ntukwasi-obi-ya nye Israel, (Abụ Ọma 30)
Abụ nke ntụkwasị obi na-ekwupụta na a pụrụ ịtụkwasị Chineke obi iweta ikpe ziri ezi, zọpụta ndị a na-emegbu emegbu na ilekọta mkpa nke ndị ya. (Abụ Ọma 62)
Ọ bụrụ na enwere isiokwu na-eme ka a dị n'otu n'ime Akwụkwọ Abụ Ọma, ọ bụ otuto nye Chineke, maka ịdị mma na ike ya, ikpe ziri ezi, ebere, ịdị ebube na ịhụnanya. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Abụ Ọma niile, ọbụlagodi iwe na ihe mgbu, jiri amaokwu ikpeazụ na-enye Chineke otuto. Site n’ihe atụ ma ọ bụ site n’inye ha ntụziaka kpọmkwem, ndị ọbụ abụ na-agba onye na-agụ ya ume isonyere ha n’ofufe.
5 amaokwu mbụ si Abụ Ọma
Abụ Ọma 23: 4N'ihi na asi na ejem ije na ndagwurugwu kachasi ike, m'gaghi-atu egwu ihe ọjọ ọ bula; n'ihi na Gi onwe-gi nọyerem; Mkpara gị na mkpara gị na-akasi m obi. "
Abụ Ọma 139: 14 “M na-eto gị n'ihi na e kere m egwu ma maa mma; ọrụ gị dị ebube; Amaara m ya nke ọma. "
Abụ Ọma 27: 1 “Onyenwe anyị bụ ìhè m na nzọpụta m - whomnye ka m ga-atụ egwu? Onye-nwe-ayi bu ebe-ike nke ndum, whonye ka m'gātu egwu? "
Abụ Ọma 34:18 "Chineke nọ nso ndị obi ha tiwara etiwa, Ọ na-azọpụtakwa ndị e gburu mmụọ ha."
Abụ Ọma 118: 1 “Keleenụ Jehova, n’ihi na ọ dị mma; ịhụnanya ya na-adịru mgbe ebighị ebi. "
Olee mgbe Devid dere abụ ọma ya, n’ihi gịnịkwa?
Ná mmalite nke abụ ọma ụfọdụ Devid dere, mara ihe na-eme ná ndụ ya mgbe o dere abụ ahụ. Ihe omuma atu ndi edeputara n'okpuru otutu ihe omuma nke Devid, tupu ochichi na mgbe oburu eze.
Abụ Ọma 34: "Mgbe ọ mere ka ara na-agba ya n'ihu Abimelek, onye chụpụrụ ya wee pụọ." N'ịgbanahụ Sọl, Devid gbagara n'ókèala ndị iro ma jiri aghụghọ a gbapụ eze obodo ahụ. Okposụkedi David osụk akade ntan̄mfep m withoutnyeneke ufọk m̀m or ata idotenyịn ke ekikere owo, Psalm emi edi ọkpọsọn̄ idatesịt, ọkọm Abasi ke ndikop eseme esie nnyụn̄ nnyan̄a enye.
Abụ Ọma 51: "Mgbe Netan onye amụma bịakwutere ya mgbe Devid kwasasịrị iko na Bat-sheba." Nke a bụ abụ ákwá, nkwupụta mwute nke mmehie ya na ịrịọ maka ebere.
Abụ Ọma 3: "Mgbe ọ gbapụrụ n'aka nwa ya nwoke Absalọm." Abụ a na-akwa ákwá nwere ụda dị iche n’ihi na nhụjuanya Devid bụ n’ihi mmehie onye ọzọ, ọ bụghị nke ya. Ọ na - agwa Chineke mmetụta ọ na - enwe, ọ na - eto Chineke maka ikwesị ntụkwasị obi ya ma rịọ Ya ka o bilie ma zọpụta ya n'aka ndị iro ya.
Abụ Ọma 30: "Maka nraranye nke ụlọ nsọ ahụ." O nwere ike ịbụ na Devid dere abụ a na njedebe nke ndụ ya, mgbe ọ na-akwadebe ihe maka ụlọ nsọ ahụ Chineke gwara ya nwa ya nwoke bụ Sọlọmọn ga-ewu. David dere abụ a iji kelee Chineke Onye zọpụtara ya ọtụtụ oge, iji too ya maka ikwesị ntụkwasị obi ya ọtụtụ afọ.
Gịnị mere anyị kwesịrị iji na-agụ abụ ọma?
Kemgbe ọtụtụ narị afọ, ndị Chineke echewo ihu n’ebe Abụ Ọma nọ n’oge ọ ofụ nakwa n’oge ihe isi ike. Ebube magburu onwe ya nke abụ ọma na-enye anyị okwu ndị anyị ga-eji na-eto Chineke dị ebube a na-apụghị ịkọwa akọwa. Mgbe ihe ndọpụ uche ma ọ bụ nchegbu na-emetụta anyị, Abụ Ọma na-echetara anyị Chineke dị ike ma na-ahụ n'anya nke anyị na-efe. Mgbe ihe mgbu anyị mere nke ukwuu nke na anyị enweghị ike ikpe ekpere, mkpu nke ndị ọbụ abụ na-etinye ihe mgbu na mgbu anyị.
Abụ Ọma na-akasi obi n'ihi na ha na-echetara anyị Onye Ọzụzụ Atụrụ anyị na-ahụ n'anya ma na-ekwesị ntụkwasị obi na eziokwu na Ọ ka nọ n'ocheeze - ọ dịghị ihe dị ike karịa Ya ma ọ bụ karịa ike Ya. Abụ Ọma na-emesi anyị obi ike na n'agbanyeghị ihe anyị na-eche ma ọ bụ na-enwe, Chineke nọnyeere anyị ma dị mma.
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis kpọrọ Biden onye isi ala ọhụrụ nke United States na ekwentị
Next Post → Post ozo:Ozioma nke taa dị ka Nọvemba 14, 2020 na okwu Pope Francis